မယ့်ကိုး: ဂုဏ်ပြုမခံရပေမယ့် ကြီးပွားရှင်သန်နေဆဲ
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 4/01/2012 09:57:00 AM
ဒီပို့စ်လေးကို သေချာအားထုတ်ပြီးရေးထားမှန်း သိသာတယ်. ကျေးဇူးပဲ မမယ်ကိုးရေ...
Balloon ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို အစက သဘောမပေါက်ဘူး. ပြီးမှ နားလည်သွားတယ်.
Minimalist ကို မြန်မာလို ပြန်ထားတာလေးများ မရှိဘူးလားမသိဘူးနော်...
ဆက်ရန်ကို မျှော်နေမယ် မမယ်ကိုးရေ...
1/4/12 10:28 AM
2/4/12 5:06 PM
:D <- ဒါလည်း ခံစားချက်သရုပ်ဖော်ကဗျာပါ။ : နဲ့ D ပေါင်းထားတာ :P
2/4/12 9:11 PM
19/4/12 3:10 PM
ဒီပို့စ်လေးကို Myanmar Blogs Digest မှာ ဝေမျှပေးဖို့အတွက် ယူသွားပါတယ် မမယ့်ကိုးရေ...
7/9/13 7:07 AM